an-trano > Vokatra Yarn > Nylon fdy
nylon FDY dia manondro ny fampidirana ny mamelatra ny lanitra eo amin'ny kofehy dingana mba hahazoana ny rivotra, mankao kofehy amin'ny fironana sy ny mpanelanelana amin'ny tontolo avo crystallinity, izay no tena voasarika nylon kofehy.
Io karazana vokatra isan-karazany dia manana ny ampiasainy. Izy io dia zavatra tsara izay manolo vy, vy, varahina ary metaly hafa amin'ny plastika, ary dia zava-dehibe injeniera plastika; nandatsaka be nylon anaovan'ireo manolo-mahatohitra faritra milina fitaovana, ary manolo alloys toy ny varahina sy anaovan'ireo-mahatohitra faritra fitaovana. Tsy mety ho ny famokarana anaovan'ireo-mahatohitra faritra, fifindran'ny faritra ara-drafitra, fitaovana tokantrano faritra, faritra mpanamboatra fiara, Sokiro fisorohana milina, fitaovana simika tany izany sy fitaovana simika. Toy ny turbines, Gears, bearings, impellers, cranks, dashboards, fiara zana, valves, lelany, visy hazo, avo-tsindry washers, screws, ny voanjo, ny famehezana vava vola, shuttles, tanany, bushing connectors, sns
Nylon no kofehy indrindra indrindra, ary misy ihany koa ny vola kely ny nylon foto fibre. Nylon kofehy no tena ampiasaina mba hanaovana kofehy mafy ho amin'ny famokarana ny ba kiraro, atin'akanjo, fanatanjahan-tena akanjo, sns
Nylon fdy Fotsy avo lenta dia 600-1200d
Salud Yarn Nylon FDon Fiki-bary avo lenta 100-1200d mpamatsy, miaraka amin'ny fitaovana fitsapana hahatratrarana ny fampandrosoana ny Yarn New Yarn sy ny fandrindrana ny famokarana mpanjifa.
Nylon fdy Fotsy avo lenta 1200-1890d
Salud Yarn tsara indrindra kalitao nylon FDon FDA Highity Fivarotana 1200-1890D Factory, matanjaka R& D Team, manana milina fanaraha-maso feno ho an'ny vokatra vaovao novolavolaina izahay.
Familiana Nylon Yarn Hmls 150-600d
Salud Yarn Filan-tsary Nylon Kalon Kalon Yarn HMLS 150-600d Wholesale - Technology Dongguan Snud Technology Co., Ltd.
Ny Ollon Fdy Fahacity 1200-1890D
Salud Yarn Intro to nylon Fiki-boninahitra Fahacity Highity 1200-1890D Salud Yarn, nametrahanay ny modely mpamatsy vola any ivelany, arahabaina tsara ny fandresena fandresena Win-Win Corches Win-Win-Win-Win-Win-Win.
Filent Fillament yarn hmls 600-1200d
Salud Yarn Best Nylon Fillament Yarn HMLS 600-1200d Factory Vidiny - Salud Yarn, vokatra voasarona amin'ny Poy, FDY, DTY, tombony azo.
Filent Fillament yarn hmls 1200-1890d
Ny filam-borona tsara indrindra amin'ny Salud Yarn Best Nylon Yarn Hmls 1200-1890D mpamatsy, amboary ny zava-maniry tsy mandoko, anisan'izany ny DOPE DED, HANK DEDED, CONE DEDED TECHY Teknolojia.
Salud Yarnn Monfilament Monfarnement, Ny vidin'ny Factory 7-900D
Ny Nylon Fdy Dope dia nanala ny fahatapahana avo lenta 150-600d
Ny Salud Yarn Wholesale Nylon Fdy dia nanala ny tombom-boasary 150-600D tamin'ny vidiny tsara - Salud Yarn, miaraka amin'ny fitaovana fitsapana mba hanatratrarana ny fampandrosoana ny famokarana vaovao sy ny famokarana ny famokarana ny mpanjifa.
Salud Yarn Monfilament Nylon Monfilament Yarn 900-1800D mpamatsy, ekipa mpivarotra varotra vahiny. Afaka mifanitsy amin'ny olana isan-karazany amin'ny varotra iraisam-pirenena isika.
Ny Nylon Fdy Dope dia nanala ny fahatapahan-kevitra avo lenta 600-1200d
Salud Yarn kalitao tsara indrindra Ny Dope Dopity dia nanala ny vatolampy 600-1200d, ny vokatra natokana ho an'i Poy, Fdy, Dty, tombony azo.